सोच र भाग्यको समीक्षा - वर्ड फाउंडेशन
सोच र भाग्यको समीक्षा
सोच र भाग्य पुस्तक समीक्षाहरू
मेरो मात्र सन्देश एक प्रसिद्ध "धन्यवाद।" यो किताबले मेरो बाटोमा असर पारेको छ, मेरो हृदय खोल्यो र मेरो मूलमा उत्साहित भयो! म स्वीकार गर्दछु कि केहि भौतिक समस्याहरु को जटिलता मलाई र मैले पुरा तरिकाले केहि बुझ्न को लागि, यदि अधिकांश सामाग्री को नहीं। तर, यो उत्साह को कारण मेरो भाग हो! प्रत्येक पढाइको साथमा मैले अझ बढी बुझ्न पाउछु। हेरोल्ड मेरो हृदयमा एक मित्र हो, यद्यपि म उहाँलाई भेट्न पर्याप्त भाग्यशाली थिएन। म भौतिक सामाग्री को लागी निश्चय गर्न को लागी धन्यबाद को लागी जो हामीलाई आवश्यक छ। म अनैतिक कृतज्ञ छु!
पर्सिवलको सोच र भाग्य जीवनको बारेमा सही लिखित जानकारीको लागि कुनै पनि गल्ती खोजकर्ताको अन्त्य गर्नु पर्छ। लेखकले उनीहरूलाई बोल्नुको बारेमा थाहा पाउँछ। त्यहाँ कुनै फजी धार्मिक भाषा छैन र कुनै व्याख्या छैन। यस शैली मा उदार अद्वितीय, पार्सल ले लेखेको छ कि त्यो जानता छ, र त्यो एक महान सम्झौता जानता छ - निश्चित रूप देखि कुनै अन्य ज्ञात लेखक भन्दा अधिक। यदि तपाईं अचम्म हुनुहुन्छ भने तपाईं किन हुनुहुन्छ, तपाईं किन यहाँ हुनुहुन्छ, ब्रह्मांडको प्रकृति वा जीवनको अर्थ तोक्सिवलले तपाईंलाई छोड्नेछैन। विशेष रूप देखि रोचक कुराहरु उनको धेरै व्याख्या हुन् जुन यस्तो मूल रहस्य को रूप मा मूल पाप को रूप मा स्पष्ट गर्दछ, अवधारणा को उन्मूलन, मानिस को पतन र लिंग को कारण। यी प्रश्नहरूका जवाफहरू उदार, प्राधिकरण र आश्चर्यजनक छन्। प्रत्येक सोच व्यक्तिको लागि अगाडीको सडक सादा बनाइएको छ र महान राईको उनको विस्तार सबै भन्दा राम्रो लेखिएको छ। विवरणहरु संग स्पष्ट र स्पष्ट रूप देखि प्रस्तुत गरिएको छ, सबै महान कार्य पर्वेलल जस्तै आफ्नो टोम को सिद्धान्तहरुलाई कुनै पनि ईमानदार व्यक्ति बुझ्न र गर्न सक्छन्। एक कुराको लागि निश्चित: सोच र भाग्य पढ्न पछि तपाईंले गतिमा सेट गर्नुभएका विचारहरू तपाईंको वास्तविक भविष्य तिर लाग्ने विचारहरू। तयार होउ!
पक्कै पनि सोच र भाग्य हाम्रो समयको लागि एक विशिष्ट महत्त्वपूर्ण प्रकाश हो।
चौडाई र गहराई सोच र भाग्य विशाल छ, तैपनि यसको भाषा स्पष्ट, सटीक, र भावुक छ। पुस्तक पूर्ण रूपमा मौलिक छ, यसको अर्थ यो स्पष्ट रूपमा पर्सिभलको आफ्नै सोचबाट उत्पन्न भएको हो, र त्यसैले सम्पूर्ण कपडाको हो, सम्पूर्णमा एकरूप। ऊ अनुमान लगाउँदैन, ऊ अनुमान लगाउँदैन अथवा अनुमान पनि गर्दैन। ऊ कुनै प्यारेन्थिकल टिप्पणी छैन। त्यहाँ कुनै शब्द बाहिर स्थानमा छैन जस्तो देखिन्छ, कुनै शब्द जुन दुरुपयोग वा महत्व बिना। एक समानान्तर र अन्य धेरै सिद्धान्तहरू र अवधारणाहरूको विस्तार फेला पार्नेछ जुन पश्चिमी ज्ञान शिक्षामा समावेश छ। एकले नयाँ फेला पार्छ कि नयाँ, नयाँ उपन्यास पनि छ र यसलाई चुनौती दिनेछ। यद्यपि न्यायको लागि हतार नगर्नु बुद्धिमानी हुनेछ तर आफूलाई संयमित गर्नु किनभने पर्सिवल आफूलाई पाठकको अपरिचित विषयबाट आफूलाई बचाउने बारेमा त्यति चिन्तित छैन किनकि उनी आफ्नो प्रस्तुतिकरणको तर्कसंगत आफ्नो खुलासाको समय र अनुक्रम क्रमबद्ध गर्न दिदैछन्। पर्सीवाल पढ्दा हेन्डेलको "वर्ड टु द दिज" भन्ने बिन्ती पनि त्यस्तै उपयुक्त हुनेछ: "यस्तो आग्रह छ कि पाठकले कुनै प्रशंसा वा दोषको सबै अभिव्यक्तिलाई रोक्नु हुँदैन जबसम्म कामको अध्ययनले उनलाई यसको योग्यता वा ब्यक्तिबाट उचित तवरले सन्तुष्ट गर्दैन।"
यो एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो जुन यस ग्रहको ज्ञात र अज्ञात इतिहासमा लेखिएको हो। विचार र ज्ञानले तर्कको लागि अपील गरेको छ, र सत्यको "औंठी" छ। एचडब्ल्यू पर्सिभल मानवजातिको लागि लगभग अज्ञात उपभोक्ता हो, जसको निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्दा उनका साहित्यिक उपहारहरू प्रकट हुन्छन्। मैले पढेका धेरै गम्भीर र महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरूको अन्त्यमा धेरै "सिफारिस गरिएको पठन" सूचिहरूमा उनको कलाकृतिको अनुपस्थितिले म चकित भएँ। उहाँ वास्तवमै सोचविचार गर्ने पुरुषहरूको संसारमा सबैभन्दा उत्तम राखिएको रहस्य हो। एक आनन्ददायी मुस्कान र कृतज्ञता को भावनाहरु भित्र पैदा हुन्छन्, जब म त्यो धन्यको सम्झन्छु, पुरुषहरुको संसारमा हेरोल्ड वाल्डविन पर्सिभल भनेर चिनिन्छ।
मैले प्राप्त नगरेसम्म मैले कहिल्यै बुझिनँ सोच र भाग्य, हामी कसरी शाब्दिक रूपले हाम्रो सोचाइको आफ्नै भाग्यलाई त्रास बनाउँछौं।
सोच र भाग्य ठीक छ पैसा पैसा फिर्ता लिन सकेन। म यो मेरो सम्पूर्ण जीवन खोजिरहेको छु।
मैले यो अध्ययनको सुरुवात नगरेसम्म यो थिएन सोच र भाग्य मैले मेरो जीवनमा उजुरी गरेको साँचो प्रगतिलाई ध्यान दिए।
सोच र भाग्य एच डब्ल्यू पर्सिवल द्वारा लेखिएको सबैभन्दा उल्लेखनीय पुस्तकहरू मध्ये एक हो। यो उमेर-पुरानो प्रश्न, Quo Vadis संग डील गर्दछ? हामी कहाँबाट आयौं? हामी यहाँ किन छौं? हामी कहाँ जाँदैछौं? उनले वर्णन गर्दछन् कि कसरी हाम्रो आफ्नै विचारहरू हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हाम्रो कार्य, कार्य, वस्तुहरू र घटनाहरू हुन्। कि हामी मध्ये प्रत्येक यी विचारहरु को लागी जिम्मेवार छ, र हामी र अरुहरु मा उनीहरुको प्रभावहरु। पर्सिभलले हामीलाई देखाउँदछ कि हाम्रो दैनिक जीवनमा "अराजकता" को रूपमा देखा पर्ने केहि उद्देश्य र अर्डर छ जुन यदि हामी आफ्नो सोचाइमा केन्द्रित गर्न थाल्छौं र वास्तविक चिन्तन शुरू गर्दछौं भने देख्न सकिन्छ, जुन उहाँको उत्कृष्ट कृतिमा उल्लिखित छ। पर्सिभल आफैले स्वीकार गर्दछ कि ऊ न त प्रचारक हो न शिक्षक हो, तर हामीलाई बुद्धिको आधारमा एक ब्रह्माण्ड विज्ञान प्रस्तुत गर्दछ। आदेश र उद्देश्यको एक ब्रह्माण्ड। कुनै पनि मेटाफिजिकल पुस्तकले यस पुस्तकमा उपलब्ध स्पष्ट, संक्षिप्त, जानकारी प्रस्तुत गरेको छैन। साँच्चै प्रेरणा र प्रेरणादायक!
सोच र भाग्य मलाई अद्भुत लाग्यो। यसले मलाई राम्रो संसार बनाएको छ र हामी साँच्चै यो उमेरको लागि यो जवाफको जवाफ हो।
व्यक्तिगत रूपमा, मलाई लाग्छ कि बुद्धि-गहिरो समझ - र स्पष्ट र स्पष्ट जानकारी मा निहित सोच र भाग्य HW प्रतिद्वंद्वी मूल्य भन्दा बाहिर छ। यसले विश्वका धर्महरूमा धेरै लेखिएका महान लेखहरू, जसले पेरिसिवलको तुलनामा अस्पष्ट, असफलता र भ्रमित देखिन्छ। मेरो अनुमान 50 वर्ष अनुसन्धान मा आधारित छ। केवल प्लेटो (पश्चिमी दर्शनशास्त्रका पिता) र जेन बौद्ध धर्म (विपरित) पर्सिवल नजिकको नजिक आउनुहोस्, जो स्पष्ट र पूर्ण तरिकाले दुवैलाई एकताबद्ध बनाउँछ!
Percival वास्तव मा 'छेदित पर्दा' छ र उनको पुस्तकले ब्रह्मांड को रहस्य खोल्यो। मलाई यो किताब दिइएपछि मलाई स्ट्रेट जैकेट वा बोईर्डको लागि तयार थियो।
सोच र भाग्य एक विस्तृत विविधता मा एकदम राम्रो किस्म मा एक धेरै राम्रो उपचार हो र यस सन्दर्भ मा एक विश्वकोश को केहि हो। मलाई यकीन छ कि म यो मेरो व्याख्यान र मेरो काममा सन्दर्भ जारी राख्छु।
म वर्षहरु को लागि धेरै विषयों को अध्ययन गरिरहेको छ र यो मान्छे थियो यो थाहा थियो कि कसरि सबै संग एक साथ मिश्रण र एक जीवन को समृद्ध बुनाई को बाहिर राख्नु र हामी / हो जो होइन।
मेरो सिद्धान्त र पढाइको बावजुद सोफिया र साँच्चिकै सोचेको दशौं प्रणालीमा, म अझै पनि यो महसुस गर्दछु सोच र भाग्य यसको उल्लेखनीय रूपमा सबैभन्दा उल्लेखनीय, सबैभन्दा व्यापक, र सबैभन्दा असामान्य रूपमा भ्रामक पुस्तक हो। यो एक एकल भोल्युम हो कि म मेरो साथ रहूँगा, यदि म कुनै अन्य कारणका लागि थिए कि सबै अन्य पुस्तकहरु बाट विभाजित भए।
मैले पढेको छु सोच र भाग्य अब दुई पटक र शायद नै विश्वास गर्न सक्छ कि यस्तो उत्कृष्ट पुस्तक साँच्चै अवस्थित छ।
विगत धेरै दशकहरु मा मैले धेरै प्रकारका विद्यालयहरू पढेँ जुन विभिन्न प्रकारका विद्यालयहरू पढ्नको लागी मनुष्यको स्वभावसँग संकीर्ण अर्थ र साथसाथै व्यापक सम्भावनाको बारेमा सम्बन्धित अध्ययन गर्दछ। धेरै, मैले स्कूल र कामका धेरै अध्ययनको अध्ययनमा मानिसहरूको रगतको वास्तविक स्वभावको बारेमा प्रस्तावको कुनै मूल्य थियो। अनि त्यसोभए एक दिन राम्रो लाग्यो सोच र भाग्य.
पेशामा एक मनो-फिजियोथैरेपिस्टको रूपमा, मैले श्री पर्सिवलका कामहरू प्रयोग गरेको छु र धेरै भ्रष्ट व्यक्तिहरूको उपचार र समझ गर्नका लागि - र यो काम गर्दछ!
मेरो पति र मैले दुवैको हरेक दिनका पुस्तकहरूको अंशहरू पढ्दछौं र हामीले भेट्टाएका सबै कुराहरू सत्यको अवधारणाहरु मार्फत वा के गरिन सक्छौ। उहाँले प्रतीकात्मक मूर्खतामा अर्डर राख्नुभयो कि म हरेक दिन मेरो नजिक जान्छु। हल्का आधारहरू शान्त भएर बसेका छन्। म विश्वास गर्छु सोच र भाग्य सम्भवतः सबै भन्दा उत्कृष्ट किताब लेखिएको छ।
हामी सबै यी दुई उद्धरणहरू धेरै पटक सुनेका छन्, "तपाईंको सबै प्राप्त गर्न, समझ प्राप्त गर्नुहोस्," र "मानिसले आफैंलाई जान्दछ।" म यो अरूलाई अझ राम्रो थाहा छैन कि यो हेरोल्ड डब्ल्यू पेरिकल